Zanu-PF Inoti Ichatonga Kusvika Madhongi Amera Nyanga, CCC Ichiti Kana Smith Aidaro
Kubvumbi 04, 2022
Bato ririkutonga reZANU PF rinoti rinotarisira kutonga Zimbabwe kusvika madhongi amera nyanga uye ravimbisa kusimbaradza, zvirongwa zvekudzidzisa nhengo dzaro pamwe nevamwe vanovatsigira, hutungamiriri nezvegwara remusangano.
Vachitaura pamusangano wavaitwa nevatori venhau muHarare nhasi apo bato iri range richionekana neavo vakasarudzwa kuti vanoita zvidzidzo zvehutungamiriri kuMwalimu Julius Nyerere Leadership School kuTanzania, munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaObert Mpofu vati bato reZanuPF richatonga kwenguva ndefu nekudaro vacharamba vachidzidzisa nhengo dzebato ravo nezvegwara rechimurenga
Izvi zvatsigirwawo nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri VaTafadzwa Mugwadi avo vati bato reZanu PF rakasarudza vanhu makumi matatu nevatanhatu
VaMugwadi vatiwo bato ravo ndiro chete rine nhoroondo yeZimbabwe pamwe neramangwana rakajeka renyika izvo zvakaita kuti vabatane nemamwe mapato ane nhoroondo dzekusunungura nyika kuti varambe vachidzidzisa veruzhinji nezvenhoroondo dzenyika.
Asi vachipindura, vakafaniobata chigaro chemutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change, VaJob Sikhala vati zviri kutaurwa neZanu-PF hazvina maturo ose.
Izvi zvatsinhirwawo neMutauriri werimwe remapato anopikisa reMDC T vaWitness Dube vatiwo Zanu PF inozvinyepera kuti ichatonga kwemakore akawanda
Vatiwo vanoda kuyambira bato iri kuti kana richiita zvebato ravo vasazoshandise mari dzenyika.
Vanhu vakasarudzwa ava vari kuenda kunotanga zvidzidzo nechitatu kwemazuva matanhatu.
Chikoro cheMwalimu Julius Nyerere Leadership School chakaparurwa mwedzi wapera mushure mekubatana kwemapato matanhatu emuAfrica anoti Zanu PF, Chama Cha Mapinduzi (CCM) yekuTanzania, African National Congress (ANC) yeku South Africa, the People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA) yekuAngola ,South West African People’s Organisation (SWAPO) yekuNamibia pamwe ne Mozambique Liberation Front (FRELIMO).